Xildhibaan wada abaabul cadaadis lagu saarayo Farmaajo, Kheyre iyo Fahad | KEYDMEDIA ONLINE
Sanatarkii ugu horreeyay ee Soomaaliya yeelato Abshr Bukhaari, ayaa wada dadaal xooggan oo cadaadis lagu saarayo kooxda Farmaajo, kuwaas oo lagu eedeeyay in ay iibsadeen dhalyaro loo qaaday Eritrea.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiye ku xigeynka koobaad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Fadaraalka Soomaaliya, Abshir Maxamed Axmed ‘Bukhaari’ oo hore ugu dhawaaqay in xaafiiskiisu hoggaamin doono dadaal lagu raadinayo dhalin yarada maqan ee loo qaaday Eritrea, ayaa sheegay in la qaban-qaabiyay munaasabad ay waalidiinta caruurtu ka maqan tahay iyo Xubnaha Baarlamaanka Fadaraalka ku matala lagu kulan siinayo.
Waraaq ka soo baxay Xaafiiska Guddoomiye ku xigeynka koobaad ee Golaha Aqalka Sare, ayaa Xildhibaanada labada Gole ee BFS, looga codsaday in ay ka soo qeyb galaan kulan Isniinta soo socota 14-ka Juun ka dhacaya huteelka Jaziira ee Magaalada Muqdisho, kaas oo lagu kulan siinayo guddiga waalidiinta dhallinyarada maqan iyo wakiiladooda ku metala Dowlada Federaalka Soomaaliya.
“Xaafiisku wuxuu abaabulayaa, kulan ay u wakiisheen guddiga waalidiinta dhallinyarada maqan, iyaga oo doonaya in ay idin la wadaagaan tabashadooda xogta la xariirta, ubadkooda iyo dadaallada ay ku taamayaan in lala garab istaago kari sidii ay caddaalad ku heli lahaayeen dhalinyaradaas iyo waalidiintuba”. Ayaa lagu yiri waraaqda ku sootay labada Gole ee Baarlamaanka.
Dowladda Fadaraalka, ayaan wali xaqiiqda ka sheegin dhalinyarada loo qaaday Eritrea, warbixinno caalami ah ayaana sheegaya in dhalinyarada loo daad gureeyay waqoyiga Itoobiya si ay qeyb kaga noqdaan dagaalkii dalkaas ka qarxay dhamaadkii sanadkii hore.
Waxaa la rumeysan yahay in Farmaajo, tiliyaha NISA, Fahad Yaasiin, iyo Ra’iisul Wasaarrihii hore Xasan Cali Kheyre, ay shirko ku ahaayeen daabulidda dhalinyaraan, waxaana loo dirayaa baaqyo ku aaddan in ay xaqiiqda wajahaan.